Waa maxay sababta Nadiifinta Xogta ay Muhiim u tahay iyo Sida aad u Fulin karto Hannaanka Nadaafadda Xogta iyo xalalka | Martech Zone
Tayada xogta liidata ayaa ah walaac isa soo taraya oo ay qabaan hogaamiyayaal badan oo ganacsi maadaama ay ku fashilmeen in ay gaaraan yoolalka la hiigsanayo. Kooxda falanqeeyayaasha xogta - kuwaas oo loo malaynayo inay soo saaraan xogo lagu kalsoonaan karo - waxay ku bixiyaan 80% waqtigooda nadiifinta iyo diyaarinta xogta, iyo kaliya 20% waqtiga ayaa loo daayaa in la sameeyo falanqaynta dhabta ah. Tani waxay saameyn weyn ku leedahay wax soo saarka kooxda maadaama ay tahay inay gacanta ku ansixiyaan tayada xogta xog-ururinta.
84% agaasimayaasha guud waxay ka walaacsan yihiin tayada xogta ay ku salaynayaan go'aanadooda.
Agaasimaha Guud ee Caalamiga ah Outlook, Forbes Insight & KPMG
Ka dib marka ay la kulmaan arrimahan oo kale, ururadu waxay raadiyaan hab toos ah, sahlan, oo sax ah oo lagu nadiifiyo laguna habeeyo xogta. Blog-kan, waxaan ku eegi doonaa qaar ka mid ah hawlaha aasaasiga ah ee ku lug leh nadiifinta xogta, iyo sida aad u hirgelin karto.
Waa maxay Nadiifinta Xogta?
Nadiifinta xogtu waa erey ballaadhan oo tilmaamaya habka loo samaynayo xogta loo isticmaali karo ujeeddo kasta oo loogu talagalay. Waa habka hagaajinta tayada xogta kaas oo meesha ka saaraya macluumaadka khaldan iyo kuwa aan sax ahayn ee kaydadka xogta iyo qiyamka la jaanqaaday si loo gaaro aragti joogta ah dhammaan ilaha kala duwan. Habka badanaa waxaa ku jira hawlaha soo socda:
Ka saar oo beddel – Goobaha ku jira xog-ururinta inta badan waxa ku jira xarfo hormood ah ama raad-raac ama calaamado aan faa’iido lahayn oo u baahan in la beddelo ama laga saaro si loo lafaguro (sida meelaha bannaan, eber, xargaha, iwm.).
Kala saar oo isku dar - Mararka qaarkood goobaha waxaa ku jira xubno xog la isku daray, tusaale ahaan, the Cinwaanka garoonka waxaa ku jira Nambarka Wadada, Magaca wadada, dareenka, State, iwm. Xaaladahan oo kale, meelaha la isku daray waa in loo kala qaybiyaa tiirar kala duwan, halka tiirarka qaar ay tahay in la isku daro si loo helo aragti wanaagsan oo ku saabsan xogta - ama shay u shaqeeya kiiskaaga isticmaalka.
Beddel noocyada xogta - Tani waxay ku lug leedahay bedelida nooca xogta ee goobta, sida beddelka Lambarka Telefoonka beerta hore u ahayd string ilaa Number. Tani waxay hubinaysaa in dhammaan qiyamka goobta ku yaala ay sax yihiin oo ansax yihiin.
Xaqiiji qaababka - Goobaha qaarkood waa inay raacaan qaab ama qaab sax ah. Taas awgeed, habka xogta nadiifinta ayaa aqoonsanaya qaababka hadda jira oo u beddela si loo hubiyo saxnaanta. Tusaale ahaan, the Telefoonka Maraykanka Number raacaya qaabka: AAA-BBB-CCCC
Sawaxanka ka saar – Goobaha xogtu waxa ay inta badan ku jiraan erayo aan qiimo badan soo kordhinayn, sidaa awgeed, soo bandhig buuq. Tusaale ahaan, tixgeli magacyada shirkadahan 'XYZ Inc.', 'XYZ Incorporated', 'XYZ LLC'. Dhammaan magacyada shirkadu waa isku mid laakiin hababka falanqayntaadu waxay u tixgelin karaan inay yihiin kuwo gaar ah, iyo ka saarista erayada sida Inc., LLC, iyo Incorporated waxay hagaajin kartaa saxnaanta falanqayntaada.
Isku dhig xogta si loo ogaado nuqullada - Xog-ururinta waxay inta badan ka kooban yihiin diiwaanno badan oo isku mid ah. Kala duwanaansho yar oo magacyada macaamiisha ah ayaa u horseedi karta kooxdaada inay geliso badan ku jiraan xogta macaamiishaada. Xogta nadiifka ah oo la jaanqaadaysa waa inay ka kooban tahay diiwaanno gaar ah - hal diiwaan urur kasta.
Habaysan iyo Xog Aan Habaysan
Mid ka mid ah dhinacyada casriga ah ee xogta dhijitaalka ah ayaa ah inaysan ku habboonayn ku habboonaanta goobta tirada ama qiimaha qoraalka. Xogta qaabaysan waa waxa shirkaduhu sida caadiga ah ula shaqeeyaan - Tirada xogta lagu kaydiyay qaabab gaar ah sida xaashiyaha ama miisaska si ay ugu shaqeyso si sahlan. Si kastaba ha ahaatee, ganacsiyadu waxay ku shaqeeyaan xog aan habaysanayn in ka badan iyo sidoo kale… tani waa tayo ahaan xogta.
Tusaalaha xogta aan habaysan lahayn waa luqadda dabiiciga ah ee laga helo qoraalka, maqalka, iyo ilaha muuqaalka. Mid ka mid ah mid caan ka ah suuqgeyntu waa ka soo ururinta dareenka astaanta ee faallooyinka khadka. Xulashada xiddigtu waa la habeeyey (tusaale, dhibcaha 1 ilaa 5 xiddigood), laakiin faallooyinka waa mid aan qaabaysan oo xogta tayada leh waa in lagu farsameeyaa habaynta luuqadda dabiiciga ah (NLP) algorithms si ay u sameeyaan qiimaha cabbirka ee dareenka.
Sidee loo Xaqiijiyaa Xogta Nadiif ah?
Habka ugu waxtarka badan ee lagu hubin karo xogta nadiifka ah waa in la baaro meel kasta oo laga soo galo aaladahaaga oo si barnaamij ah loo cusboonaysiiyo si loo hubiyo in xogta si sax ah loo geliyo. Tan waxaa lagu fulin karaa dhowr siyaabood:
Beeraha u baahan - hubinta in foom ama isdhexgalka ay tahay in ay dhaafaan meelo gaar ah.
Isticmaalka noocyada xogta goobta - Bixinta liisaska xaddidan ee xulashada, tibaaxaha joogtada ah si loo qaabeeyo xogta, iyo kaydinta xogta noocyada xogta habboon si loo xaddido xogta qaabka habboon iyo nooca la kaydiyay.
Is dhexgalka adeegga qolo saddexaad - isku dhafka qalabka dhinac saddexaad si loo hubiyo in xogta si sax ah loo kaydiyo, sida goobta ciwaanka ee ansaxiyay ciwaanka, waxay bixin kartaa xog tayo leh oo joogto ah.
Xaqiijinta - Macaamiishaadu inay xaqiijiyaan lambarkooda telefoon ama ciwaanka iimaylka waxay hubin kartaa in xogta saxda ah la kaydiyay.
Meesha laga soo galo uma baahna kaliya inay noqoto foom, waa inay noqotaa isku xidhaha nidaam kasta oo xogta ka gudbiya nidaamka kale. Shirkaduhu waxay inta badan isticmaalaan aaladaha si ay u soosaaraan, u beddelaan, oo u raraan xogta (ETL) ee u dhaxaysa nidaamyada si loo hubiyo in xogta nadiifka ah la kaydiyo. Shirkadaha waxaa lagu dhiirigelinayaa inay fuliyaan helitaanka xogta hantidhawrka si loo diiwaangeliyo dhammaan meelaha laga soo galo, habaynta, iyo ka faa'iidaysiga ee xogta ay gacanta ku hayaan. Tani waxay muhiim u tahay hubinta u hoggaansanaanta heerarka amniga iyo qawaaniinta gaarka ah sidoo kale.
Sida Loo Nadiifiyo Xogtaada?
In kasta oo in la haysto xog nadiif ah ay fiicnayd, nidaamyada dhaxal-galka ah iyo anshax-marinta habacsanaanta soo dejinta iyo qabashada xogta inta badan way jiraan. Tani waxay nadiifinta xogta ka dhigaysaa qayb ka mid ah hawlaha kooxaha suuq-geynta intooda badan. Waxaan eegnay hababka ay hababka nadiifinta xogta ku lug leeyihiin. Waa kuwan siyaabaha ikhtiyaarka ah ee ururkaagu u fulin karo nadiifinta xogta:
Xulashada 1: Isticmaalka Habka Ku-saleysan Xeer
Python iyo R waa laba luuqadood oo inta badan loo isticmaalo barnaamijyada codaynta si xogta loo maareeyo. Qorista qoraallada xogta nadiifka ah waxay u ekaan kartaa faa'iido tan iyo markii aad heshay algorithms si waafaqsan dabeecadda xogtaada, weli, way adkaan kartaa in la ilaaliyo qoraalladan waqti ka dib. Waxaa intaa dheer, caqabada ugu weyn ee habkan waa in la codeeyo xal guud oo si fiican ula shaqeeya xog-ururineed oo kala duwan, halkii ay adagtahay in la codeeyo xaalado gaar ah.
Xulashada 2: Isticmaalka Aaladaha Is-dhexgalka Platform
Goobo badan ayaa bixiya barnaamij ama cod la'aan xirayaasha si loo kala wareejiyo xogta nidaamyada qaab habboon. Goobaha iswada lagu dhex dhisay ayaa helaya caannimo si ay aaladaha u dhexgalaan si fudud agabka shirkadooda. Qalabyadani waxay inta badan ku daraan habab kicin ama qorsheysnaa oo lagu socodsiin karo soo dejinta, waydiinta, ama qorista xogta hal nidaam ilaa mid kale. Goobaha qaarkood, sida Qalabaynta Robotic Automation (RPA) goobaha, waxay xitaa geli karaan xogta shaashadaha marka xogta la isku xidho aan la heli karin.
Doorashada 3: Isticmaalka Sirdoonka Artificial
Xog-ururinta-dhabta ah waa mid aad u kala duwan oo fulinta caqabadaha tooska ah ee beeraha waxay ku siin kartaa natiijooyin aan sax ahayn. Tani waa meesha sirdoonka macmal ah (AI) aad bay u caawin kartaa. Qaababka tababbarka xogta saxda ah, saxda ah, iyo saxda ah ka dibna adeegsiga moodooyinka tababaran ee diiwaannada soo socda waxay caawin karaan calaamadinta cilladaha, aqoonsashada fursadaha nadiifinta, iwm.
Qaar ka mid ah hababka lagu wanaajin karo AI inta lagu jiro nadiifinta xogta ayaa lagu xusay hoos:
Ogaanshaha cilladaha ku jira tiirka.
Aqoonsiga ku tiirsanaanta xidhiidhka ee khaldan.
Helitaanka diiwaannada nuqul ka mid ah iyada oo la isku ururinayo.
Doorashada diiwaanada sare ee ku salaysan suurtogalnimada la xisaabiyay.
Doorashada 4: Isticmaalka Aaladaha Tayada ee Xogta Is-Adeegga
Iibiyeyaal gaar ah ayaa bixiya hawlo kala duwan oo tayada xogta ah oo baakadeysan sida qalab, sida data nadiifinta software. Waxay u adeegsadaan hogaaminta warshadaha iyo sidoo kale algorithms-ka-lahaanshiyaha si ay u sifayn, nadiifin, jaangooyo, is waafajinta, iyo isku darka xogta ee ilo kala duwan. Aaladaha noocaan ah waxay u dhaqmi karaan sidii fur-iyo-ciyaar waxayna u baahan yihiin inta ugu yar ee wakhtiga la fuulo marka la barbar dhigo hababka kale.
Natiijooyinka habka falanqaynta xogtu waxay u wanaagsan yihiin sida tayada xogta wax gelinta. Sababtan awgeed, fahamka caqabadaha tayada xogta iyo hirgelinta xal dhammaadka-ilaa-dhamaadka ah si loo saxo khaladaadkan ayaa kaa caawin kara inaad xogtaada nadiifiso, habaysan, oo loo isticmaalo ujeeddo kasta oo loogu talagalay.
Salaanka Xogta waxa uu bixiyaa qalab qani ku ah sifada kaa caawinaysa in aad meesha ka saarto qiyamka aan joogtada ahayn iyo kuwa aan sax ahayn, abuurto oo ansixiso habab, oo aad ku guulaysato aragti la jaanqaadaysa dhamaan ilaha xogta, hubinta tayada xogta, saxnaanta, iyo isticmaalka
Booqo Salaanka Xogta Macluumaad Dheeraad ah
Tags: Datahantidhawrka xogtaotomaatiga xogtanadaafada xogtanadiifinta xogtaadeegga nadiifinta xogtadata nadiifinta softwaresoo saarista xogtasoo dejinta xogtaIsdhexgelinta xogtajaranjarada xogtaculayska xogtasayniska xogtabeddelka xogtaisbeddelka xogtasoosaaraysida loo nadiifiyo xogtaPythonxog tayo lehxog tirootomaatiga nidaamka robotkaKoonfur Afrikaxog qaabaysanmacluumaad aan haboonayn